पौडेल समूहका नेताहरुको बैठक बत्तिसपुतलीमा
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिसहित पदाधिकारीका उम्मेदवार चयन गर्न पौडेल समूहको बैठकका नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन् । पौडेल समूहका सभापतिका आकांक्षीसहितका नेताहरुको बैठक अहिले बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा जारी छ । वडा अधिवेशन अघि सभापतिको उम्मेदवार चयन गर्न पौडेल समूहका नेताहरु निरन्तर छलफलमा छन् […]
कांग्रेसमा पौडेल समूह विभाजित, महामन्त्रीमा युवा आमनेसामने
नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा सभापति शेरबहादुर देउवालाई टक्कर दिँदै आएको रामचन्द्र पौडेल समूह विभाजित भएको छ । महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवार तय हुन नसकेपछि पौडेल समूहबाट शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह उम्मेदवार बनेका छन् । पौडेल समूहबाट मुलत शेखर र प्रकाशमानसँगै पौडेल र शशांक कोइराला पनि उम्मेदवार थिए । त्यसमध्ये पौडेल र शशांक सभापतिको दौडबाट ब्याक हुँदै शेखर र प्रकाशमानलाई मिल्न आग्रह गरिएपनि त्यो सफल हुन सकेन । शनिबार दुबै नेताले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै पौडेल समूहभित्रकै समीकरण बदलिनुक...
Lokaantar 1 महिना पहिले
साझा उम्मेदवारको अन्तिम रस्साकस्सीमा पौडेल समूह
काठमाडौं, मंसिर २२ । आसन्न १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध एकमात्र साझा उम्मेदवार खडा गर्ने संस्थापनइतर समूहको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । नेतृत्वका आकांक्षी नेताबीच साझा उम्मेदवारका रूपमा आ–आफ्नो पक्षमा सहमति जुटाउने अन्तिम रस्साकस्सी भने भइरहेको छ । संस्थापन पक्षबाट देउवाले पुनः नेतृत्व दाबी गरेका छन् भने संस्थापनइतर समूहबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र […]
देउवाको अस्त्रले पौडेल समूह ‘छिन्नभिन्न’
काठमाडौं, २३ असोज । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा इतर समूहलाई विभाजन गर्ने रणनीतिमा लागेका थिए । १४औं महाधिवेशनमा आफू इतर समूह एकढिक्का भएमा पुनः सभापति बन्ने सम्भावना कमजोर हुने विश्लेषण उनी पक्षका नेताहरुको थियो । वडा अधिवेशन हुँदै पालिका तहको अधिवेशन अधिकांश ठाउँमा सम्पन्न हुँदा देउवा स्पष्ट बहुमतमा देखिएनन् । उनी […]
गगनको साथले पौडेल समूह उत्साहित
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । काठमाडौं महनगरपालिकामा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि भइरहेको गुटगत प्रतिस्पर्धाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह उत्साहित भएको छ। १३ औँ महाधिवेशनबाट उदय भएको पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहमा रहेका युवा नेता गगन थापा महानगर अधिवेशनमा खुलेर आफ्नो पक्षमा लागेपछि पौडेल समूह उत्साहित भएको हो। महानगर अधिवेशनमा थापाले खुलेरै गठजोड बनाएर सिटौला समूह […]
नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०७८
देउवा पेलेरै बढेपछि पौडेल समूह आक्रामक
काठमाडौं, ६ असोज । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार र पार्टीभित्र पेलेरै बढेका छन् । उनले धमाधम आफू निकटस्थहरुलाई मन्त्री बनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले सपथ लिंदा नै गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुरलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । आज देउवाले परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. […]
देउवाको गृहजिल्लामा फेरि चुनाव माग्दै पौडेल समूह पुग्यो सानेपा
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा वडा तहमा पुनः चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै रामचन्द्र पौडेल समूह सानेपा पुगेको छ। काँग्रेसको निर्वाचन समितिलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन पौडेल महामन्त्री शशांक कोइरालालगायतका नेतासहित सानेपा पुगेका हुन् । सो क्रममा महादेवप्रसाद यादव नेतृत्वको निर्वाचन समितिले डडेलधुरामा पुनः चुनाव सम्भव नभएको जवाफ दिएको बताइएको छ । तर अन्य स्थानमा निष्पक्षताका सन्दर्भमा कडाइ गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको समितिले पौडेल समूहलाई प्रतिबद्धता जनाएको छ । त
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर मानिएको रामचन्द्र पौडेल समूहले डडेल्धुरा जिल्लामा भएको वडा अधिवेशन अस्वीकार गरेको छ । गत २५ भदौमा डडेल्धुरामा सम्पन्न वडा अधिवेशन सत्ता र शक्तिको आडमा एकतर्फी रूपमा धाँधली र बलमिच्याइपूर्वक गरिएको भन्दै पौडेल समूहले सो जिल्लाको वडा अधिवेशन पुनः गरिनुपर्ने बताएको हो । नयाँ अधिवेशन मिति तोकेर नेतृत्व छान्न पार्टी नेतृत्व […] The post देउवाविरुद्ध पौडेल समूह आक्रामक appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
डडेल्धुराको वडा अधिवेशन अस्वीकार्य : पौडेल समूह
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा इतर समूहले सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा गरिएको वडा अधिवेशन अस्वीकार्य भएको बताएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह निकट नेताहरुको सोमबार बसेको बैठकले डडेल्धुरामा यही भदौ २५ गते भएको वडा अधिवेशन अस्वीकार्य गर्ने निस्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले बलपूर्वक […]
Khabarhub श्रावण २०७८
देउवाविरुद्ध पौडेल समूह एक ढिक्का
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको संस्थापनइतर मानिएको रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टीको आगामी १४औं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षविरुद्ध एक ढिक्का हुने घोषणा गरेको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेल समूहले १४औं महाधिवेशनमा आफ्नो समूह एक भएर सहमतिमा हालका सभापति देउवाविरुद्ध उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हो । कांग्रेस महाधिवेशनका लागि विधानले तोकेको सबैभन्दा तल्लो […] The post देउवाविरुद्ध पौडेल समूह एक ढिक्का appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
सभापतिको साझा उम्मेद्धवार तय गर्न पौडेल समूह आन्तरिक छलफलमा
काठमाडौं, १६ भदौ । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । आसन्न १४औं महाधिवेशनमा आफ्नो समूहको तर्फबाट सभापतिको लागि साझा उम्मेद्धवार तय गर्ने तयारी भएको एक नेतलो जानकारी दिए । हिजोपनि यो समूहको बैठक बसेको थियो । हिजोको बैठक पौडेल निवासमा बसेपनि आज भने बत्तिसपुतलीस्थित् अनुपम फुडल्याण्डमा […]